သစ်သားအခြေအနေဖြင့် Irregular Acrylic Makeup အလှဆင်ကြေးမုံကို ၀ ယ်ပါ WoopShop®
သစ်သားအခြေစိုက်စခန်းနှင့်အတူ Irregular Acrylic မိတ်ကပ်အလှဆင်ကြေးမုံ
အရောင် စတိုင်လ်အေ စတိုင်လ်ခ
သစ်သားအခြေပြုနှင့်အတူ Irregular Acrylic မိတ်ကပ်အလှဆင်ကြေးမုံ - စတိုင် A backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
မော်ဒယ်နံပါတ်: Irregular ကြေးမုံ
ပစ္စည်း: Acrylic မှန်ဘီလူး + သစ်သားအခြေစိုက်စခန်း
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ - မမှန်၊ ၂၄ စင်တီမီတာ * ၁၅ စင်တီမီတာ * ၁၀ စင်တီမီတာ
ထုပ်ပိုးခြင်းတွင်မှန် + အခြေခံဖြစ်သည်
မွတ္စု: မှန်ကိုအကာအကွယ်ပေးသည့်ရုပ်ရှင်နှင့်ဖုံးထားသည်။ အသုံးမပြုမီအကာအကွယ်ပေးသည့်ရုပ်ရှင်ကိုဖျက်ပစ်ပါ
အနည်းငယ်သေးငယ်ပေမယ့်အလွန်ချစ်စရာ Par contre odeur très forte
ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့သီတင်းပတ် ၂-၂ ပတ်အလိုအလျင်အမြန်လာနိုင်
Perrrfect !!!!! အရမ်းလှတယ် !!!! ချစ်သူ ဒါတော်တော်လေးကောင်းတယ် ခိုင်ခံ့သော Chuan နှင့်ရီးယဲလ်တို့ကဖန်တီးခဲ့သောဝမ်သည်ပူနွေးလိမ့်မည်။
ပြီးပြည့်စုံသော, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်2ပတ်အတွင်းဖြန့်ဝေ!